पम्प - यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विवरण, सबै आधुनिक कार मा पूर्ण स्थापित छ जो एक हो। यो तत्वको जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु को बाध्य परिसंचरण लागि पंप छ इन्जिन शीतलन प्रणाली (ODS)। द्वारा कार VAZ दशौं "परिवार" यो बाध्य परिसंचरण संग, सम्पूर्ण बन्द छ। र आज हामी VAZ-2110 मा पम्प परिवर्तन गर्न कसरी, साथै यसको उपकरण सिक्न हेर्न हुनेछ।
mechanically वा बिजुली संचालित - मोटर वाहन संसारमा सबै कूलेंट पंपों को दुई प्रकार बीच भेद। पहिलो मामला मा यो एक कैंषफ्ट वा द्वारा संचालित छ क्रैन्कशाफ्ट एक प्रयोग आन्तरिक दहन इन्जिन बेल्ट प्रसारण। बिजुली को मामला मा यो सबै आफ्नै नियन्त्रणमा सिस्टम छ जो एक बिजुली मोटर, बनाउँछ। मिसिन को प्रकार र आकार को बिना बस इन्जिन, यो पम्प अगाडि सेट गरिएको छ। VAZ-2110 कुनै अपवाद छ।
यो उपकरण को विवरण मान्छ कि यो अपकेंद्र को पंप प्रकार। साथै, तत्व को संरचना को प्ररित गर्नेवाला र आवास प्रवेश गर्छ। पहिलो भाग अक्सर एक चरखी संग सापट मा माउन्ट छ। आवास पनि हुन त फलाम वा एल्यूमीनियम डाली गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्ररित गर्नेवाला गर्न जल र जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु उत्पादन लागि विशेष च्यानल छ। पंप आवास र आन्तरिक दहन इन्जिन को सिलेंडर ब्लक बीच गैसकेट राख्नुभयो। यो कूलेंट पंप देखि लीक छैन।
को प्ररित गर्नेवाला वा प्ररित गर्नेवाला - पंप को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व मध्ये एक छ प्रणाली मा जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु circulates। यो वस्तु विशेष आकार को ब्लेड को एक सेट छ र ड्राइव शाफ्ट मा माउन्ट छ। उत्तरार्द्ध बेयरिंग मा आवास मा स्थित छ। ड्राइभ चरखी को चुच्चो को विपरीत पक्ष मा स्थित छ।
प्रतिस्थापन र पंप को स्थापना (VAZ-2110 र 2112)
गरेको यस समाप्तिन्यू सुरु गरौँ। सबै को पहिलो नकारात्मक देखि तार हटाउन ब्याट्री को टर्मिनल। थप वाहन देखि कूलेंट मर्ज। सुविधाको लागि, तपाईं adsorber हटाउन सक्नुहुन्छ। यसको समाप्तिन्यू, को तार र Hoses छोएर बिना। त्यसपछि इन्जिन shrouds हटाउन र म पिस्टन सिलेंडर शीर्ष मृत केन्द्र स्थिति सेट (अर्थात्, एक ठाउँ लिन पर्छ जब सङ्कुचन स्ट्रोक)।
त्यसपछि ज्याक लिन र वाहन को अगाडि उठाउनु। सही पाङ्ग्रा हटाउन। त्यसपछि भिडियो र कैंषफ्ट चरखी निकाल्न। निम्नानुसार यस गरेको छ:
पहिलो रोलर्स tensioning attenuated, र त्यसपछि तिनीहरूले समय बेल्ट साथ सँगै झिकिएको छन्। सावधान रहनुहोस्! कि पछि, तपाईं पिस्टन को वाल्व प्रहार हुन सक्छ रूपमा क्रैन्कशाफ्ट र camshafts घुमाउन आवश्यक छैन।
को कैंषफ्ट गियर वोल्ट नट आदि खोल्नु। दाँत को fragility ध्यान।
अर्को चरणमा हामी पंप को प्लास्टिक केसिङ हटाउन। तल आफ्नो माउन्ट बोल्ट रूपमा कार अन्तर्गत प्राप्त छ। पहिले हाम्रो आँखा पंप देखा मा। VAZ-2110, भाग्यवस, कायम गर्न सजिलो छ, त्यसैले कूलेंट पंप सजिलो हुनेछ हटाउन। तपाईं पहिलो तीन माउन्ट हेक्स हटाउन पर्छ। अर्को, एक कूलेंट पंप कन्टेनर राखिएको छ। रूपमा त्यहाँ एउटा अपरिहार्य लिक जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु हुनेछ, तत्व हटाउने जब यो हाम्रो लागि उपयोगी छ।
तपाईं स्थापना गर्दा थाहा पाउनुपर्ने?
हाम्रो कार देखि सबै सफलतापूर्वक पुरानो पम्प हटाउन। VAZ-2110 पूरा गर्न, नयाँ सदस्य जारी। यो कुनै विशेष उपकरण बिना गर्न सकिन्छ। सिद्धान्त मा, पम्प (VAZ-2110, 2112) उल्टो क्रममा, त्यस्तै निष्कासन को स्थापना, तर हामी पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अंक ध्यान दिनुहोस गर्नुपर्छ।
पहिले, नयाँ भाग एक स्नेहक हुनु पर्छ। अक्सर त्यहाँ पहिले नै वर्तमान छ। तर यो गर्दैन भने, तेल तत्व सुनिश्चित। दोश्रो, को पम्प 2110-औं मोडेल कागज प्याड छ भने, उनको सीलेंट मा राख्नु र यो dries सम्म 10-15 मिनेट प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तपाईं त ठाउँ मा टुक्रा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी किन VAZ-2110 मा एक अतिरिक्त पम्प गर्नुपर्छ?
अक्सर, घरेलू कार को मालिक अतिरिक्त कूलेंट पम्प स्थापना गर्ने बारे सोच छन्। दुई पंपों को फलस्वरूप एकदम निष्क्रिय गति मा आन्तरिक दहन इन्जिन को ताप दक्षता वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। र 1000 Rev / मिनेट मात्र न्यानो हावा मा बैरल चुलो अघि भने, त्यसपछि उन्नयन को सैलून एउटा तातो प्रवाह हुनेछ जान पछि। साथै, जब कूलेंट सिस्टम पम्प मा ड्राइभिङ एक पंप को उपस्थिति मा हासिल गर्न सकिएन जो राम्रो वितरण, सुनिश्चित गर्नेछ।
सहायक कूलेंट त्यहाँ परिवेश तापमान माइनस 20-25 डिग्री सेल्सियस मा महत्वपूर्ण शक्ति चुलो कमी छ जहाँ, उत्तरी अक्षांश बस्ने कार मालिकहरूको लागि पंप को विशेष सान्दर्भिक स्थापना। र हाम्रो कार राम्ररी दोस्रो पम्प स्थापना, यो जाडो समयमा यात्री खण्ड गर्मी गर्न सक्षम छन् किनभने - स्थिति सुधार गर्न मात्र प्रभावकारी तरिका हो। सोही, यो प्रविधी लामो बीएमडब्ल्यू कार मा अभ्यास गरिएको छ र "मर्सिडीज"। त्यसैले अतिरिक्त पंप आफ्नो मित्र एक कदम नजिक एक विदेशी कार हुनेछ फलाम।
त्यसैले, हामी पंप कसरी फुकाल्नु बाहिर समझ। VAZ-2110 र यसको "भाइ" मोडेल 2111 र 2112 यस्तै डिजाइन कूलेंट प्रणाली छ, त्यसैले यो पुस्तिका परिवारमा सबै वाहन सान्दर्भिक छ।
डज कैलिब्रे। समीक्षा
GAZ "बाघ" - एक वास्तविक uncompromising जनावर
एसयूवी "टाटा": प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो र समीक्षा
"VAZ-2110": को क्रैन्कशाफ्ट सेन्सर। , उद्देश्य र सञ्चालनको सिद्धान्त
क्लाज को प्रकार
Beginners को लागि क्रिकेट
कसरी छुट्टी लागि सान्टा क्लाउस चरणमा आकर्षित गर्न
स्वादिष्ट व्यवहार - चकलेट मक्खन
पारिवारिक जीवन मनोविज्ञान
DEXP (ल्यापटप): समीक्षाएँ मालिक
इलेक्ट्रोनिक चुरोट Wismec: उत्कृष्ट गुणवत्ता, उचित मूल्य
आईएमईआई आईफोन कसरी जाँच गर्ने? IMEI द्वारा आईफोन सक्रियता जाँच गर्नुहोस्
के खाने बच्चाको लागि छिटो र स्वादिष्ट को2वर्ष खाना पकाउनु?
फुटसल: फिफा द्वारा खेल को नियम। फुटसल लागि लक्ष्य के हुनुपर्छ